DAAWO:Madaxweyne ku xigeenka Puntland oo ka qayb galay xaflad lagu sagootinayey gudoomiyaasha Baarlamaanada DFS & Dowladd goboleedyada – Puntlandtimes
DAAWO:Madaxweyne ku xigeenka Puntland oo ka qayb galay xaflad lagu sagootinayey gudoomiyaasha Baarlamaanada DFS & Dowladd goboleedyada
April 11, 2019 Abdurahmaan Editor
GAROWE(P-TIMES)- Madaxweyne ku xigeenka Puntland ahna ku simaha Madaxweynaha Mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa habeenkii xalay ahayd ka qayb-galay Xaflad ballaaran oo casho sharaf iyo sagootin isugu jirtay, taas oo loo sameeyay gudoomiyaasha Baarlamaanada DFS iyo dowladd goboleedyada oo shir ku yeeshay Garowe.
Kulankan casho sharafta ah ayaa waxaa madaxweyne ku xigeenka ku wehelinayey guddoomiye ku xigeenka 2-aad ee gollaha shacabka Soomaaliyeed Mahad Cabdalle Cawad iyo gudoomiyaha Baarlamaanka Puntland, Jubbaland, Koonfur Galbeed, Hirshabelle, xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Puntland iyo marti sharaf kale.
Madaxweyne ku xigeenka Puntland ayaa sheegay inuu ku farxsan yahay kasoo qayb galka kulankan lagu sagootinayo gollaha afhayeenada gollayaasha xeer dajinta Soomaaliya, waxaana uu bogaadiyey qorshahooda isku duubnida ah oo uu ku tilmaamay inuu yahay mid ku dayasho mudan.
Madaxweyne Ku-xigeenka Puntland oo ka qayb-galay xaflad lagu sagootinayay Golaha Afhayeenada Goleyaasha Xeer-dajinta Soomaaliya.
Madaxweyne Ku-xigeenka Puntland, ahna ku simaha Madaxweynaha Mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa caaawa ka qayb-galay Xaflad ballaaran oo casho sharaf iyo sagootin isugu jirtay,taas oo loo sameeyay Golaha Afhayeenada Goleyaasha Xeer-dejinta Soomaaliya.
Posted by Puntland State House on Wednesday, April 10, 2019
Hala dedejiyo xukunka iyo fulinta, dadka kufsiga geystey kuwa horeiyo kuwa dambe, Dab hala shido ee halagu rido. argagixisada iyga maxkamad la,aan hala dilo , ciidanka awood haloo siiyo, in ay ku bartaan shiishka. meeshaas ma degeyso hadaan gacan bira lagu qaban.